တက်ကြွစွာ နားထောင်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှု အကြောင်းရင်း ၃ ခု | Mycanvas
တက်ကြွစွာ နားထောင်ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှု အကြောင်းရင်း ၃ ခု
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကြားချင်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အမှန်တကယ် နားထောင်ချင်ကြပါတယ်။
တက်ကြွစွာ နားထောင်ခြင် သည် သင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွင် ရှေ့သို့တက်လှမ်းနိုင်ရန် ကူညီပေးရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနှင့် လေ့ကျင့်မှုအနည်းငယ်ဖြင့် ရယူပြီး ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်သော ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါဆို တက်ကြွစွာ နားထောင်ခြင် ဆိုတာ ဘာလဲ။ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား တစ်စုံတစ်ယောက်ပြောနေသည့်အရာကို အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် မျက်လုံးချင်းဆုံခြင်းကဲ့သို့သော သိသာထင်ရှားပြီး စစ်မှန်သောလက္ခဏာများကို ပြသနေပြီး ခေါင်းညိတ်ခြင်း၊ “ဟုတ်သည်” နှင့် သဘောတူကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်မေးခွန်းများမေးခြင်းကဲ့သို့သော အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုများကို ပြသနေသည်။
အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို တည်ဆောက်လိုသော မန်နေဂျာတစ်ဦး သို့မဟုတ် ရာထူးတိုးခြင်းကို ရှာဖွေနေသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါက တက်ကြွစွာ နားထောင်ခြင်းသည် သင် နောက်ထပ် နံပါတ်တစ် ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်သင့်သည့် အကြောင်းရင်းသုံးခုဖြစ်သည်။
❗ 1. သင့်ရွယ်တူချင်းများ၏ ယုံကြည်မှုနှင့် လေးစားမှုကို ရယူပါ။ လုပ်ငန်းခွင်သည် မကြာခဏဆိုသလို ဖိအားများနှင့် ဖိအားများကြောင့် တွန်းအားပေးနိုင်ပြီး လူတိုင်းသည် ယင်းကို ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြသည်။ ပြောစရာမလိုအောင်၊ လူအများစုက လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖေးမကူညီပြီး နားလည်မှုရှိတာကို သဘောကျကြပါတယ်။
သင်က မန်နေဂျာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နားလည်မှုပေးနိုင်တဲ့ အနီးနားကလူတစ်ယောက်ရှိခြင်းဟာ တခြားသူတွေရဲ့တန်ဖိုးကို သိလာပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင့်အဖွဲ့နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာအချို့ကို သိရှိနားလည်အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို တန်ဖိုးထားကြောင်း ခံစားရစေပြီး ယုံကြည်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အရာတွေကို ပြီးမြောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။
❗2. ပြဿနာများကို နားလည်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းနည်းများကို ဖန်တီးပါ။ သင်တက်ကြွစွာပါဝင်လုပ်ကိုင်ပြီး သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ သို့မဟုတ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစီးပွားရေးပြဿနာများကို နားထောင်သည့်အခါ၊ သင်သည် ပြဿနာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် အတိကျဆုံးဖြေရှင်းနည်းများကို ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။
အစည်းအဝေးထိုင်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အတွေးအမြင်တွေ ကွဲထွက်သွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အကယ်၍ သင်သည် အစည်းအဝေးကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါက သင့်အသိပညာတွင် ကွာဟချက်တွေ့နိုင်ပြီး သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စွမ်းရည်ကို အကောင်းဆုံးထင်ဟပ်စေမည့် အဖြေကို သင်မပေးနိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် တက်ကြွသောနားထောင်ခြင်းသည် သင့်အား ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်ရန်၊ ထက်မြက်သောဉာဏ်ကိုပြသရန်နှင့် ရေရှည်တွင် သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် အချိန်နှင့်ငွေကို သက်သာစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဤဥပမာတွင်၊ တက်ကြွပြီး အပြုသဘောဆောင်သော မှတ်စုယူခြင်းဖြင့် တက်ကြွစွာ နားထောင်ခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အစည်းအဝေးတလျှောက်လုံးတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော မှတ်စုအချို့ကို ချရေးခြင်းက အဓိကပြဿနာများကို တင်ပြထားသောကြောင့် သင့်အား ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး ချိတ်ဆက်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်တွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတစ်ခုရှိပြီး၊ အစည်းအဝေးပြီးသည်နှင့် အချိန်အတော်ကြာ အဖိုးတန်သောတုံ့ပြန်ချက်များနှင့် နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းများကို ပေးဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
❗3. တက်ကြွစွာ နားထောင်ခြင်းသည် သင့်အား ပဋိပက္ခများကို ပျံ့နှံ့စေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပဋိပက္ခတွေ ကြုံလာရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ အခြားသူများ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကို သင်အမြဲသဘောမတူနိုင်သော်လည်း သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ အတွေ့အကြုံများနှင့် အမြင်များကို ဖွင့်ဟရန် အရေးကြီးပြီး ၎င်းကို သရုပ်ပြရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ တက်ကြွသောနားထောင်ခြင်းမှတဆင့်ဖြစ်သည်။
အသင်းအဖွဲ့နှစ်ခုကြား ပဋိပက္ခသည် လူများကို ခုခံကာကွယ်နိုင်သော်လည်း လူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏စိုးရိမ်မှုများကို နားထောင်ပြီး အလေးအနက်ထားသည်ဟု ခံစားရပါက ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရန် အခွင့်အလမ်း မြင့်မားပါသည်။
ထို့အပြင် နှစ်ဖက်စလုံးမှ ၎င်းတို့၏ သဘောထား သို့မဟုတ် ရပ်တည်ချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်သည်ဟု ခံစားရပါက၊ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အလုပ်သမားများအား ပဋိပက္ခများအကြောင်း မှန်မှန်နှင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုရန်လည်း အားပေးနိုင်ပြီး၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုပွင့်လင်းသော လုပ်ငန်းခွင်ကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
ဖော်ပြထားသော အကျိုးကျေးဇူးများအပြင်၊ တက်ကြွစွာ နားထောင်သူဖြစ်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော စရိုက်လက္ခဏာ၊ ဂရုစိုက်မှုနှင့် ကတိကဝတ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းအားလုံးသည် ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။